Dardaaran ku wajahan Xildhibaanada Labada Aqal | Somaliwayn	Home
Saturday, January 7th, 2017 | Posted by Nuur | 470 views	Dardaaran ku wajahan Xildhibaanada Labada Aqal
Barlamaanka Tobanaad oo dalka ka shaqo bilaabay bilowgii sanadkaan ilaa hadana yeeshayna fadhiyadiisii caadiga ahaa, sameeyayna doodo iyo go’aano muhiim ah ilaa hadda. Waxaana uu u diyaargaroobaaya hada doorashooyinka Gudoomiyeyaasha iyo ku xigeendooda ee golaha Aqal sare iyo Golaha Shacabka lana go’aamiyay inay kala dhacaan January 11-12 2017
Waxaan ku xigi doona doorashada ugu muhiimsan ee madaxweynaha oo Baarlamaaku uusan wali shaacinin waqtiga kama dambeeysta ah ee la qaban doono, sidaa Darteed waxaana dhaliilsanahay shuruudaha Musharixiinta madaxweynaha oo aan ahayn kuwo saameeyn leh oo aan k aturjumayn kartida iyo xirfadaha siyaasiinta u leeyihin xallinta Khilaafaadka siyaasadeed, Xuduudeed, kheyraadka dabiiciga ah, ilaalinta falalka sharciga wax u dhimaaya iyo hufnaan ugu adeegida dadweynaha iyo ciribtirka musuqmaasuqa iyo shaqo la’aanta, wax ka qabashada abaaraha iyo fatahaadaha, kobcinta dhaqaalaha dalka, horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha dalka,waxbarasho, caafimaad,iwm.
Musuqmaasuqa waa mid k amid ah caqabadaha ugu waaweyn ee ka hor imaanaaya horumarka iyo baahida loo qabo helitaanka maamul-wanaagsan, geeddi socod siyaasadeed oo hufan iyo Sharci/Sinaan xalaal ah. La dagaalanka Musuqmaasuqa iyo kor u qaadida daacadnimada adeegga iyo maamulka dadweynaha, waana inay mudnaanta ugu weyn siiyaan xildhibaanada baarlamaanka 10-aad ee dalka.
Musuqmaasuqu wuxuu wiiqaa awoodii dowladnimo ee wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka iyo xaaladaha qalafsan ee ka jira deegaanada dalka si wax looga qabto. Xalka hogaaminta dalka waxay u baahantahay in lahorumariyo lana hirgaliyo muhiimadda ay leedahay daahfurnaanta iyo isla xisaabtanka (The importance of Transparence and Accountability).
Sidaas darteed waxaan baarlamaanka 10aad ee dalka u soo gudinaayaa fakarkeeyga muwaadinimo oo aan rabo inuu isbadal iyo dibu-eegis ku sameeyo kana doodo talooyinkaan hoos kuqoran, si loo gaaro horumar dhan kasta ah, ugana baxo dalka caqabaha jira ee hortaagan horumarka siyaasadeed, dhaqaale iyo nabadgalyo ee dalka.
Qodobadaasina waa kuwaan hoos kuqoran oo kala ah:
1 Sameeynta sharci asaasi ah oo lagu hubinayo heerka bixinta canshuuraha qaranka, gaar ahaan madaxda ugu sareeysa dalka (Madaxweeynaha,Guddoomiyeyaasha labada gole iyo ku xigeenadooda,Ra’iisal wasaaraha iyo golihiisa wasiirada, garyaqaanada garsoorka qaranka, xildhibaanada) si loo xaqiijiyo u hogaansanaantooda la xiriirta ilaalinta sharciga iyo bixinta canshuuraha. Sidoo kale waa in lahubiyaa dambiyo horay uu ugu sifoobay, Asluubtiisa & wada shaqayntiisa la xiriirta la dhaqanka dadka uu la shaqeeyo iyo tayadiisa hogaamineed ee xil qaran.
2 Waxaa lagama maarmaan ah in baarlamaanku si saxa ula socdaan nidaamka ururinta canshuuraha, diiwaanka hantida dadweynaha iyo diiwaannada kale ee adeegsiga hantida dadweynaha, sharci fulinta wax ku ool ah ee hayadaha qaran ee garsoorka. Islamarkaan waa inay ka hortagaan xildhibaanada jiritaan la’aanta xeerar sharci iyo siyaasadeed si ay ula dagaalamaan musuqmaasuqa (Shaqaale, Shaqaalaha iyo xaaladaha kale ee nidaamka Sharciga & Siyaasada) iyo guud ahaan anshaxa liita ee maamulka dadweynaha.
3 Waxaa kaloo haboon inuu baarlamaanku yeesho sharci la xiriira ogaanshaha iyo ururinta xogta la xiriirta masuuliyiinta u tartamaaya xil qaran in la xaqiijiyo marka hore wixii hanti ah uu milki ahaan u leeyahay si gaar ahaaneed iyo wixii dadkale uu shirko kula yahay. Qiimeyna lagu sameeyo hantidaas( in Cash or in Material) si looga hortago ku xadgudubka hantida dadweynaha iyo xafiiska uu masuulka ka yahay. Nidaamkaas oo la hirgaliyo wuxuu ka hotagaayaa adeegsiga Musuqmaasuqa.
Ujeedada ugu weyn ee hubinta iyo caddaynta hantida siyaasiyiinta xildoonka ah waxaa laga yaabaa in ay ka mid yihiin kuwa soo socda:
> Si loo kordhiyo daahfurnaanta iyo kalsoonida muwaadiniinta isku soo sharaxa xil ama masuuliyad qaran inay hogaamiyaan. Helitaanka macluumaad sugan oo ku saabsan hantida siyaasiyiinta iyo inta shaqaale guudahaan u shaqeeysa masuulkasta oo taagan qabashada xil qaran waa muhiim inay qariyaana qayb hantidaas ka mid ahna waa qayaano qalad ah.
> Siyaasiyiinta xil qaran u taagan gaar ahaan madaxweynaha iyo xubnaha Golihiisa fulinta waa in wax laga weydiiyaa xeeladahooda lax iriira ka hortaga colaadaha iyo xalinta qilaafaadka ka dhex dhaca shaqaalaha xafiisyada ay maaamulaan iyo sida loo xaliyo xaaladaha kale ee la xiriira muran siyaasadeed ama dhul ama khayraad dalka markay kacaan. Waxaasina waxay hubineysaa kartidiisa iyo daacadnimadiisa la xiriirta xalinta qilaafaadka soo food saara dalka guud ahaan iyo gaar ahaanba.
> Waxay muujineeysaa kala duwanaanshaha hantida gaarka ah iyo shaqaalahooda gaarka ah ee siyaasiyiinta. Waxay kaloo muujineysaa heerka kala duwanaanshaha siyaasiyiinta ee kobcinta sharcidarrada ah iyo howlaha kale sharicdarrada ah, lana siiyo ama tuso caddeeymo kufilan.
4 Baarlamaanka dalka waxaan ka fileynaa inuu bilaabo fursado laysku abaalmariyo, laguna abaalmariyo muwaadinka kasta oo dalka u horseeda horumar dhaqan-dhaqaale, siyaasadeed, maamul wanaag, abuuris dhaqaale iyo shaqo, wacyi-galin diimeed, sugida amniga dalka iyo dadka, noqonkarana qof lagu dayankaro (role model). Si lo oyareeyo ama looga hortago musuqmaasuqa siyaasada iyo maamulka dalka ragaadiyay, waxyaabaha dhaqaalaha iyo wax soo saarka dalka wax u dhimi kara, shaqa la’aanta iyo saboolnimada dadka naafeeysay, abaaraha iyo fatahaadaha soonoqnoqda, iwm.
5 Nidaamkaan waa nidaam ku cusub dalka keeni karana isbadal baaxad leh oo dhanka dhaqaalaha iyo arrimaha buLshada ee dalka. Bilaabeysana wado cusub oo lagula xisaabtami karo masuul kasta oo xil u haya dalka (Every Flag Bearer). Taasoo lagu abaalmarin karo, lagu dalacsiin karo ama amaani karo waxqabadka dadka loo arko inay dalka ku soo kordhiyeen isbadal muuqda oo la taaban karo. Wixii dhaliilo ah jirana lagu ciqaabo ama cambaareeyo tacadigooda la xiriira musuqa, eexda, maamul xumada, ama Biograph-kiisa uu beenka sheego, iwm.
6 Waxaa haboon inaan wax ka qabano caqabadaha dalka iyo dadka dib u dhigaya kana reebay wadamada horumaray. Maahan inaan iska dhaxalno maamul xumo naga hortaagan inaan si wanaagsan u fakarno runta ka hadalno iyo wixii u wanaagsan dalka iyo dadka. Waa inaan mujinaa una muujinaa jiilka soo koraaya inay wanaagsan tahay in wax wanaagsan layskaga daydo laguna tartamo, taasaana noo horseedi karta in dalka iyo dadkaba gaaraan maqam sare.
7 Hadaan hada la bilaabin isbadal siyaasadeed iyo sharci hufan oo dalku yeesho,way adkaan doontaa isbadalka noocaas ah inuu dalka ka dhaco mudooyinka dhow. Hadaan dib ugu laabto hab dhaqankii siyaasadeed iyo xildhibaanada dhalka soo maray 20-kii sano ee u dambeeysay oo ku dhisnaayd laaluush iyo musuqmaasuq taasoo dhacda xiliyada xulashada xildhibaanada iyo doorashada madaxweyne. Hadaan dhaqankaas foosha xun aan wax laga badalin waxaa adkaan doonta in la gaaro doorasho xor ah,xaq ah xalaal ah, iwm.
8 Dalku muddo ayuu ku soo jiray isqabqabsi siyaasadeed, walina 2017 inay sii jirto arrintaas waxa go’aan ka gaari kara baarlamaanka 10-aad iyo xubnihiisa. Hadii baarlamaankaan 10-aad ku shaqeeyo nidaamkii iyo falsafadii baarlamaanadii ka horeeyay iyo cod ama mooshin aan xaqiiq ku dhisnayn oo dhaqaale doon ah ama xildoon ah sida marar horeba dhacday, waxay inoo dooridoonaan waa waxan masiirka dalka iyo hogaamintiisaba aan ehel u ahayn.
Ogow xildhibaan lacagta codkaaga lagaga iibsanaayo waa dhaqaalihii dalka ee dadka masaakiinta laga soo aruuriyay lagana cunaqabteeyay ama waa lacag dalka iyo dadka masaakiinta ah loogu yaboohay. Ogsoonow haad sidaas wax ku soo doorato qofkaas aad soo dooratay dadkana u soo doortay hadhoow qalad kama qaban kartid, qaladkiisana wuxuu kaaga marsanaayaa siduu doorashadiisa kaaga marsaday (I sii aan ku siiyee).
9 Magac iyo maamuus mansab lagu gaaraa xildhibaan. Sharci iyo cadaalad dalka iyo dadka ku hogaami xildhibaan. Qofka aad u dooraneeyso xildhibaan madaxweyne inuu u noqdo 4ta sano ee soo socota waa inaad ku doorato: wadaninimo (dal iyo dad jacayl), Taariikhdiisa waxqabad qiimee, maamul wanaagiisa qiimee, aqoontiisa iyo waaya aragnimadiisa qiimee, ilaalintiisa sharciga iyo qawaaniinta dalka qiimee.
Xildhibaan waxaad tahay xeer ilaaliye qaran,sidaas darteed codkaaga iyo go’aankaaga ha noqdo mid wax dhisa laakiin hakadhigin mid wax dumiya dano gaar ahna loo adeegsado.
Dr. Cabadiqaadir Salaad Cilmi
Short URL: http://somaliwayn.org/?p=51052